Izindlela ezi-5 Zokuqinisa Inqubo ngaphandle Kokwenza Ubuciko Obufaka Engcupheni | Martech Zone
Abakhangisi nabasunguli bangathola ukusikeka okuncane lapho kukhulunywa ngenqubo. Lokhu akufanele kusimangaze. Ngemuva kwakho konke, sibaqasha ngokwazi kwabo ukuba ngabokuqala, ukucabanga, nokungajwayelekile. Sifuna bacabange ngokukhululeka, basisuse endleleni eshayiwe, futhi bakhe umkhiqizo omusha ogqame emakethe eminyene.
Asikwazi-ke ukujika silindele ukuthi okwethu ukudala kube kuhleleke kakhulu, abalandeli bezinqubo ezigxile enqubweni abangakwazi ukulinda ukuhlaziya ama-nuances wokuhamba komsebenzi okusebenzayo.
Kepha nabakhululeke kakhulu phakathi kwethu kufanele bavume ukuthi lapho izinqubo zibuthakathaka noma zishoda, izingxabano zibusa, futhi lokho akukuhle ekukhishweni kokudala.
Ezweni lapho osebenzisa ulwazi olumaphakathi echitha khona 57% wesikhathi sabo on konke kodwa umsebenzi ababeqashelwe ukuwenza, ukubeka uhlobo lwesakhiwo olufanele kubaluleke kakhulu kunakuqala. Yindlela kuphela yokugcina i-pandemonium ivulekile futhi unike amandla wonke umuntu ukuthi enze umsebenzi wakhe omuhle kakhulu.
Nazi izindlela ezinhlanu zokuqinisa izinqubo zokubuyisa isikhathi somsebenzi wokuzuzisa, wobuciko ohambelana nezinhloso zamasu ezibaluleke kakhulu zebhizinisi.
1. Yiba Nesibindi Ngayo
Ngingumlandeli omkhulu wendlela kaKelsey Brogan "yenqubo ebucayi" Njengomqondisi wokuphathwa kohlelo oluhlanganisiwe ku T-Mobile, UKelsey uthanda ukufakazela abantu ukuthi ukuhamba komsebenzi okuhleliwe akudingeki ukuthi kubambe.
Abantu abaningi abalithandi igama elithi 'inqubo' — noma umbono-ngoba bacabanga ukuthi liqinile kakhulu. Akukona ukudala imingcele ekhawulelwe ukugcina abantu besendleleni yabo. Imayelana nokwazi ukuthi izinto zikuphi, lapho izinto kufanele zibe khona, ukuthi zilingana kuphi. Imayelana nokufaka hlangana izinhlu zawo wonke umuntu nokuzibeka endaweni lapho wonke umuntu angakwazi ukufinyelela kuyo.
UKelsey Brogan, uMqondisi Wezokuphathwa Kwezinhlelo Ezihlanganisiwe kwa-T-Mobile
Kepha akathembeli emandleni akhe okukholisa noma asebenzise igunya eliphakeme lokuthola amaqembu agibele. Esikhundleni salokho, usiza iqembu elilodwa liguquke ngasikhathi, bese evumela izinzuzo ezisobala zezinqubo ezinamandla ukuzikhulumela. Lapho nje amaqembu aseduze ewubona umehluko owenziwa ukuphathwa komsebenzi webhizinisi, aqala ngokushesha ukumemeza ukuthi abe yingxenye yawo uqobo. Indlela kaKelsey iwubufakazi bokuthi lapho ushintsho luphathwa ngempumelelo, ludlulela futhi lubanzi ngokomzimba.
2.Faka izifanekiso Emsebenzini Ophindwayo
Izinhlobo zokudala zivame ukungakuthandi ukuphindaphinda, umsebenzi ongenangqondo kakhulu kuningi. Bakhulule ekukhungeni ngokusebenzisa izifanekiso noma kuphi lapho kunengqondo khona. Sebenzisa ubuchwepheshe bokuphathwa komsebenzi webhizinisi ukwenza uhlu oluphelele lwemisebenzi yezinhlobo ezahlukahlukene zamaphrojekthi, unikeze ngokuzenzakalela izindima zomsebenzi emisebenzini, futhi ulinganise ubude besikhathi namahora ahlelelwe umsebenzi ngamunye ongaphansi. Lokhu empeleni kwenza zonke izinqubo zenqubo ebuhlungu zingabonakali kubuqambi bakho.
Abathengisi bangangena nje bese babona ngokushesha umsebenzi ababelwe wona ngawodwana. Futhi abaphathi bokudala bangasebenzisa amathuluzi wokuhlela izinsiza ezakhelwe ngaphakathi ukulandelela ukutholakala kwawo wonke umuntu, kunokuba benze ukuqagela okufundile noma ukuthumela ama-imeyili amaningi ukuthola ukuthi ngubani onesikhathi salokho.
3. Yisho i-Goodbye kuma-Sticky Notes
Okuthile okulula njengokulula izivumelwano zakho zokudla, okusetha isigaba salo lonke iphrojekthi, kungenza umehluko omkhulu kunqubo yakho yonke yokudala. Qala ngokuqinisekisa ukuthi zonke izicelo zomsebenzi zithunyelwa ngendlela efanayo — hhayi nge-imeyili, inothi elinamathelayo, noma ngomyalezo osheshayo. Ungasetha ifomu le-Google eligcwalisa ngokuzenzakalela ispredishithi esimaphakathi noma, okungcono nakakhulu, ngokunenzuzo ekusebenzeni kwesicelo somsebenzi kungxenyekazi yakho yokuphathwa komsebenzi webhizinisi.
4. Khipha Ubuhlungu Ekufakazeni
Ukube ubungakhetha ingxenye eyodwa kuphela yenqubo yokudala ukuze uqinise futhi wenze lula, ukufakazela ubufakazi yikhona okungenzeka ukuthi kunqobe izinhliziyo nezingqondo zethimba lakho lobuciko. Ngobuchwepheshe bokubonisa bedijithali, ungasusa amaketanga angalawuleki we-imeyili, impendulo ephikisanayo, kanye nokudideka kwenguqulo. Abasunguli nabaphathi bethrafikhi bangabona kalula ukuthi ngubani ophendulile nokuthi ngubani ongaphendulanga, esinciphisa kakhulu isidingo sokujaha ababambiqhaza noma ukucela impendulo.
Ngamaphoyinti ebhonasi, engeza ukuphathwa kwempahla edijithali (i-DAM) kuhlu lwakho lwamathuluzi. Bonke abathengisi bazokuthokozela ukufinyelela ngokushesha kuzinguqulo zakamuva zezimpahla ezivunyiwe, abangazilungisa kabusha futhi bazithumele kumafomethi abawadingayo, ngaphandle kokuya kumgcini wesango lomklami wezithombe. Cabanga ukubukeka kobuso babaklami bakho lapho bezwa ukuthi ngeke baphinde bathumele i-imeyili kumuntu omnyama nomhlophe inguqulo ye-jpg yenkampani yenkampani futhi.
5. Mema okokufaka kwawo wonke umuntu
Noma kunini lapho wenza ushintsho kuzinqubo ezikhona — noma ngabe wenza inguquko ephelele yedijithali noma usebenzisa izibuyekezo eziqondisiwe zokuhamba komsebenzi — mema okufakwayo kulabo abazozwa umthelela wezinguquko kakhulu. Ngenkathi uzoba nomphathi wohlelo noma uchwepheshe wokulawulwa kwephrojekthi owenza umsebenzi wokuhlaziya ukuhamba komsebenzi, ukubhala izinyathelo, nokwakha izifanekiso, qiniseka ukuthi abadali okulindeleke ukuthi bathobele inqubo babandakanyeka kuzo zonke izinyathelo lendlela.
Nikeza Inqubo ithuba
Uzwile isaga esidala sokuthi ukwakhiwa okuhle kufanele kungabonakali. Izinqubo zomsebenzi kufanele zisebenze ngendlela efanayo. Lapho basebenza kahle, akufanele ubaqaphele. Akufanele bazizwe bephazamisa noma bephazamisa noma bekhathaza. Kufanele ngokuthula, ngokungabonakali basekele umsebenzi odinga ukwenziwa.
Futhi kwenzeka into ehlekisayo lapho izinhlobo zokudala zizwa izinqubo zomsebenzi ngale ndlela-ukumelana kwazo nokukhuluma ngesakhiwo nokuhamba komsebenzi konke kodwa kuyanyamalala. Bayabona ngokushesha ukuthi izinqubo ezakhiwe kahle zedijithali zenza okungaphezulu kokuzikhulula emsebenzini omatasa nasemisebenzini ephindaphindwayo. Futhi zibanika amandla okuletha umsebenzi osezingeni eliphakeme ngokushesha okukhulu futhi ngokungaguquguquki, babuyise isikhathi sobuqambi kanye nokwenza izinto ezintsha, futhi basebenzise isikhathi esiningi sosuku ngalunye benza umsebenzi ababeqashelwe ukuwenza.
Tags: inqubo yokudalaIdamuukubambisana kokuklamaizifanekiso zokuklamaubufakazi bedijithalikelsey broganamanothi anamathelet-mobile
UHeidi uyiChief Marketing Officer ye Indawo yokusebenza. UHeidi ungumholi ophethe amandla aphezulu, oqondiswe emiphumeleni futhi ongumeluleki onolwazi olungaphezulu kweminyaka engamashumi amabili ekwakheni nasekusebenziseni amasu okuya emakethe nokumaketha aqhuba ukukhula.